ကိုယ်.ကျိူးပဲကြည်.သူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကိုယ်.ကျိူးပဲကြည်.သူများ
Posted by ster on May 23, 2012 in News | 11 comments
လမ်းပေါ်မှာ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပါစေ၊ ဂရုကိုမစိုက်ဘူး။ ပန်းလှိုင်သွားတဲ. လမ်းနဲ. စက်မှုဇုန် အပိုင်း(၆)သွားတဲ.လမ်းဘက်မှာ..
ကွန်ဂရစ်လမ်းပေါ်မှာ မြေကြီးတွေ စည်းကမ်းမရှိ အပြည်.အလျှံတင်ပြီး ကျကျန်ခဲ.တာတွေလေ။
မိုးရွာတော. ကျန်တဲ.ကားတွေက ဗွက်ထဲကသွားပေါ.။
ပန်းလှိူင် golf club မရောက်ခင် ဘယ်ကွေ.သွားလမ်းပါ။
ဘာတွေလုပ်နေမှန်းမသိဘူး။ ကိုယ်အဆင်ပြေရင် ပြီးရော၊ ကျန်တဲ.လူတွေ ဘာဖြစ်ဖြစ်။
ster kyawkyaw has written9post in this Website..
View all posts by ster →
လှိုင်သာယာဘက်လမ်းတွေဆိုးတာ .. တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံက လမ်းတွေ အိပ်နေသလောက်ပေါ့ … ။
အဲ့ဒီမှာ လမ်းတွေ ဆိုးတဲ့အပြင် … စက်ရုံနဲ့အပြင်နဲ့လည်းဝေးတော့ တယောက်တည်းကားဂိတ်လျှောက်ရင်း တနေကုန်လောက်တယ် ။ လှိုင်သာယာမှာ ပြသနာတက်တာက ..ကားလမ်းတွေအပြင် ၊ … ယဉ်ကြောပါပဲ… ။ အံမယ် .. ဒါပေမယ့်နော် ..ပန်းလှိုင်ဆေးရုံနဲ့ … အိမ်ယာဘက်ကျတော့ .. အထဲမှာမြက်ခင်းနဲ့ .. ကျောက်ပြားနဲ့ … ။ လှိုင်သာယာခြင်း တူတူ .. ခွဲခြား ခွဲခြားနဲ့အေ … ။
ဟုတ်ပါ့ဗျာ..တော်တော်ဆိုးတာဘဲ ရန်ကုန်မှာ လမ်းတစ်ခြမ်းခင်းအောင်သိန်းလင်း မရှိတောဘဲ
နဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ မသိဘူး…. ပြောနိုင်တဲ့လူရှိရင် ပြောပေးကြပါအုံးဗျာ….။
ဟုတ်တယ်၊ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်ဘက်က တော်တော်ဆိုးတာဗျ။ ကျွန်တော်လဲ တခေါက်ရောက်ဖူးတယ်။ လှိုင်သာယာမှာက လမ်းအကောင်းကို သွားမရအောင်လုပ်နေတာ။ ဖျက်ဆီးနေတာ။ တတ်နိုင်တဲ.လုပ်ငန်းရှင်တွေ အများကြီးပဲ။ ဘာလို.စုပေါင်းမပြင်ကြလဲ မသိဘူး။
ma etoneရေ… တကယ်တော့ ဒီလမ်းက ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ ကွန်ကရစ်လမ်;သန့်သန့်ပါ၊ အဲဒီ ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ် မြေကြီးကားတွေ မဆံ့မပြဲ တင်ပြီး လမ်းတောက်လျှောက်ကျကျန်ရင်း နဲ့ အခုလို ရွှံ့ဗွက်လမ်းဖြစ်သွားရတာပါ။
လမ်းတွေက လမျက်နှာပြင်နဲ့ များမှားနေလေရော့သလား။
မိုးရာသီ ရောက်ပီဆိုရင်လဲ ကျနော်တို့ ဖက် တောင်ပေါ်လမ်း
တွေ မြေပြိုတာနဲ့ တောင်ကျရေဆင်းတာနဲ့ တံတားကျိုးရတာနဲ့ 
ယုအက်စ်မှာ.. လမ်းပေါ်..အထူးသဖြင့် ဖရီးဝေးဆို.. ဖိုင်းအသေချတာ..
ပုလဲလမ်းမကြီးက စလို့ အထဲဝင်တဲ့ လမ်းသွယ်တွေအဆုံး
ဟုတ်ပါတယ်၊ us မှာလောက်မဟုတ်တောင် ထိထိရောက်ရောက် ဖိုင်းချပေးမှ လုပ်ငန်းရှင်တွေ သေသေသပ်သပ် ဂရုတစိုက်လုပ်မှာ။
စက်မှုဇုံတွေက လုပ်ငန်းရှင်တွေ စုပြင်သင်.တယ်နော်၊ ကိုယ်.သဘောနဲ.ကိုယ် အဲဒီလို လုပ်ခွင်.မရှိဘူးလားတော. မသိဘူး ko kyeemite ရေ။ ကိုယ်.စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ လာတဲ.လမ်းတွေပဲ။ ဒီအတိုင်းရအောင် မောင်းနေကြတယ်။ ဟိုတလောက လမ်းကျောမသိတဲ. အပြင်က light truck တစီး အရှိန်နဲ.မောင်းလာတာ အနီးနားရောက်မှ ချိုင်.ခွက်ရှောင်လိုက်တော. စက်ဘီးစီးလာတဲ. လူ(၂)ယောက်ကိုဝင်တိုက်တာ ပွဲချင်းပြီးပဲ။ အဲဒီလမ်းမှာပဲ၊ ကားမှောက်နေတာတွေ.လို. ကျွန်တော်ဆင်းမေးကြည်.တာ။ နောက်နေ.မှာ လမ်းပေါ်မှာ အန္တရာယ်ကင်းတရားနာနေတာ တွေ.ရတယ်။ အဓိက ကလမ်းကိုပြင်ရမှာ ထင်တာပဲ။ ချိုင်.ထဲက သံချောင်းတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်နေတာ တော်တော်အန္တရာယ်များတယ်ဗျ။
မန်းလေးစက်မှုဇုန်က လမ်းတွေလဲ အပေါ်ကအတိုင်းဘဲ
သူမသာ ကိုအသုဘ ဆိုသလို….
ကျနော်တို့အိမ်နားက ရွှေတချောင်းမြောင်းကို ဖြတ်တဲ့သစ်သားတံတားလေးရှိတယ်။
အနီးနားမှာနေတဲ့ အိမ်ဘုတ်စုကလျူတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေ ငါးရာတစ်ထောင်စုပြီး
ကုန်ကားကြီးတွေက မဆန့်မပြဲတင် ပြီး မော်တော်ပီကယ်ကိုရှောင်ရင်းမောင်းတော့ တံတားလေးက
အဲတော့ အဲလို လူစားမျုိးတွေကိုလဲ ပပျောက်အောင် လုပ်ဘို့ ၀ိုင်းကြိုးစားကြပါအုံး။